Tag: Doorasho | Sagal Radio Services
Guddi loo saaray qorshaha doorashooyinka oo wax ka bedel ku sameeyay qodobada qaar
Iyadoo dhowaan Guddoonka Baarlamaanka uu guddi hoosaad u saaray qorshihii guud ee hanaanka doorashooyinka ee Xukuumadda u soo gudbisay Baarlamaanka ayaa waxaa la sheegay in Guddigan uu wax ka bedel ku sameeyay qaar ka mid ahaa qodobada doorashada.
Kenya oo doorasho ku jirta
Sagal Radio Services • News Report • March 4, 2013
Dadweynaha Jabuuti oo u dareeray doorashada xubnaha baarlamaanka Jabuuti
Dalka Jabuuti ayaa waxaa saakay ka billowday doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaas, iyadoo shacabku ay soo dooranayaan 65-ka xidhibaan ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Jabuuti.
Dhageyso qudbadihii ay jeediyeen madaxda qaranka kadib doorashada
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 10, 2012
Waxaan idin soo gudbineynaa qudbadihii ay madasha doorashada ka jeediyeen Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynihii dowladdii KMG aheyd Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha dowladda cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan Maryan Cariif.
Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • September 10, 2012
Doorashadii muddada dheer qaadatay ee maanta ka dhacday xarrunta tababarka ciidamada booliska ee Jeneraal Kaahiye, ayaa waxa ay ku soo dhamaatay guul iyo jawi degan, iyadoo madaxweyne cusubna la doortay.
Update: Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamed oo wareeggii ugu dambeeyay ku tartamaya
Wax yar ka dib markii salaadda maqrib laga soo noqday oo lagu dhawaaqay natiijadii codadkii ay heleen musharixiintii islamarkaasian ay soo gudbeen waregga labaad afar musharax, ayaa waxa sheegay inay ka hareen tartanka laba musharax oo kale.
Shuruud cusub oo la hor dhigay musharixiinta
Sagal Radio Services • News Report • September 3, 2012
Musharixiinta u taagan xilka madaxweynanimo ee dalka Soomaaliya, ayaa maanta shuruud cusub la hor dhigay. Shuruuddaasoo daba socota shuruudo kale oo hore loo hor dhigay musharixiintaas.